Al Shabaab Oo Dishay Taliyihii Nabad Sugidda DFS Ee Deegaanada Tareedishe.
Saturday September 09, 2017 - 08:21:37 in Wararka by Super Admin
Weerar Qorsheysan oo Xoogag Katirsan Xarakada Al Shabaab ay ka fuliyeen deegaan dhanka galbeed uga beegan magaalada Muqdisho ayay ku dileen Taliye Katirsan DF-ka.
sawir hore sarkaal lagu dilay Muqdisho
Howlag gaar ah oo ka dhacay deegaanka Weedoow ee u dhaxeeya deegaanka Tareedishe iyo isgoyska Ex-control Afgooye ee magaalada Muqdisho ayaa sababay dhimasha sarkaal sare oo katirsanaa sirdoonka dowladda Federaalka islamarkaana qeyb ka ahaa saraakiisha lafdhabarta u ah maamulka ka jira deegaanada duleedka galbeed uga beegan Muqdisho.
Sarkaalkan lagu dilay deegaanka Weedow ayaa lagu magacaabi jiray Cumar Khadar kaasi oo ahaa taliyihii maleeshiyaatka Nabadsugida ee deegaanada Tareedisho iyo Kax-shiikhaal ee duleedka magaalada Muqdisho.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in xilligii ladilayay sarkaalka uu saarnaa gaari nuuca raaxada oo uu ku watay wadada laamiga ah ee xiriirisa Ceelasha Biyaha iyo magaalada Muqdisho.
Xarakada Al Shabaab ayaa durbadiiba sheegatay mas'uuliyadda Cumar Khadar sida ay baahisay idaacadda Andalus ee ku hadasha Afka Xarakada Al Shabaab, dilalka iyo qaraxyada ka dhanka ah askarta iyo saraakiisha DF-ka ayaa joogta ka ah degmooyinka gobolka Banaadir iyo gobollada dalka.